Xasan Cabdi Madar
Barbaarsame: Barbaarinta iyo toosinta Ubadka
n.a., Nairobi, 2008
Buuggan waxa loogu talo galay in uu wehel u noqdo waalidka iyadoo lagusoo ururiyey waayo aragnimo iyo aqoon salka ku haysa habka barbaarinta suubban ee carruurta. Waxa kale oo loogu talo galay barayaasha, dugsiyada waxbarashada iyo dhallinyarada isu diyaarinaysa dhismaha qoys ee noqonaya waalidkii berri.
Buuggu wuxuu dhinacyo badan ka eegayaa dhibaatooyinka hortaagan habsami u barbaarinta ubadka waxanu soo gudbinayaa talooyin ku saabsan barbaarinta iyo toosinta ubadka xilli dunidu isu sii furmayso oo soomaalidu ku baahday meel kasta oo caalamka ka mid ah oo dhibkeeda iyo dhaqankeeda leh.
Bulshadu halka ay ka hagaagto ama ka xumaataa waa barbaarinta ubadka soo kacaya, wanaag oo dhammina wuxuu ka bilaabmaa qofka iyo qoyska, marka qoysku hagaago ayaa qarankuna hagaagaa. Buuggu wuxuu ku qoran yahay hab fudud oo akhristaha u sahlaya inuu la soo baxo kolba qaybta uu si guur ah u xiisaynayo.
BARBAARSAME waa buug loogu talo galay in uu wax wayn kusoo biiriyo guriga iyo maktabadda kutubta ku qoran afsoomaaliga.